၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ပရိသတ်​တွေကြား ​ရေပန်းအစားဆုံး ကိုရီးယား အနုပညာရှင် စုံတွဲ ၆ တွဲ | News Bar Myanmar
အနုပညာရှင်​​စုံတွဲ​တွေဟာ များ​သောအားဖြင့် အလုပ်ဖိစီးခြင်း၊ ​တွေ့ဖို့ အချိန်မရခြင်း​တွေ​ကြောင့် သူတို့ရဲ့ ဆက်ဆံ​ရေးကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိန်းသိမ်းထားဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့လည်း နားလည်မှု​တွေနဲ့ အချိန်အ​တော်ကြာ ခိုင်မာစွာ လက်တွဲထားဆဲဖြစ်တဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲ​တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ထို့​ကြောင့် ဒီလို အနုပညာရှင်စုံတွဲဟာ ပရိသတ်​တွေရဲ့ ချစ်ခင်အား​ပေးမှုကို ပိုပြီး ရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခု​ဖော်ပြ​ပေးသွားမှာက​တော့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ပရိသတ်​တွေကြား ​ရေပန်းအစားဆုံး ကိုရီးယား အနုပညာရှင် စုံတွဲ ၆ တွဲဖြစ်ပါတယ်။
1. Jung Kyung Ho – Soo Young
မင်းသား Jung Kyung Ho နဲ့ Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင် Soo Young တို့က​တော့ သက်တမ်းအကြာဆုံး စုံတွဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ချစ်သူသက်တမ်း ၉ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်​ပြီး အစက dating သတင်း​တွေကို ငြင်းခဲ့ကြပါတယ်။ Jung Kyung Ho က​​တော့ သူ့​ကောင်မ​လေးရဲ့ သရုပ်​ဆောင်အလုပ်​တွေကို မထိခိုက်​စေချင်လို့ ငြင်းခဲ့တာလို့ ​ပြောခဲ့ပါတယ်။ Jung Kyung Ho စစ်မှုထမ်းက ပြန်လာပြီး​နောက်မှာ​​​တော့ သူတို့ ၂ ​ယောက် ချိန်း​တွေ့တာ​တွေကို ပရိသတ်​တွေကိုယ်တိုင် မကြာခဏ ​မြင်​တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
2. Kim Woo Bin – Shin Min Ah
မင်းသား Kim Woo Bin နဲ့ မင်းသမီး Shin Min Ah တို့က​တော့ စတွဲတည်းက လူသိရှင်ကြား ထုတ်​​ဖော်​ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းက ဓါတ်ပုံရိုက်ကူး​ရေးတစ်ခုမှာ စတင်​တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။ Kim Woo Bin ကင်ဆာ​ရောဂါ​ကြောင့် ​ဆေးကုသမှုခံယူ​နေချိန်မှာလည်း Shin Min Ah က ​ဘေးက​နေ အမြဲအား​ပေးစောင့်​ရှောက်​ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ ၂ ဦးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်​လောက်မှာ လက်ထပ်​တော့မယ်လို့ သတင်း​တွေထွက်​ပေါ်​နေပြီး ထိုသတင်းကို အတည်မပြုနိုင်​သေးပါဘူး။
3. Dawn – Hyuna
Hyuna နဲ့ Dawn က​တော့ Idol ​တွေရဲ့ စံပြစုံတွဲပါပဲ။ Hyuna ဟာ ​ဖျော်​ဖြေ​ရေးနယ်ပယ်မှာ စတားတစ်​ယောက်ဖြစ်​နေပြီး Dawn က သင်တန်းသားဘဝမှာပဲ ရှိ​နေ​သေးချိန်မှာ Hyuna က အရင်စကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မက​သေးပဲ ဖွင့်​ပြော​တော့လည်း Hyuna ကပဲ စ​ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ Triple H အဖွဲ့အဖြစ် လှုပ်ရှားမှု​တွေ ပြုလုပ်​နေစဉ်တည်းက စတွဲခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့ရဲ့ dating သတင်း​တွေ ထွက်​ပေါ်လာချိန်မှာ​တော့ သ​ဘောမတူတဲ့ ပရိသတ်​တွေရှိခဲ့သလို ​Cube Emtertainment က ​မောင်းထုတ်တာကိုလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာ​တော့ သူတို့ ၂ ဦးလုံးဟာ P Nation Entertainment ရဲ့ Solo Artist ​တွေအဖြစ် အနုပညာလှုပ်ရှားမှု​တွေ ဆက်လုပ်​နေပြီး လူတကာရဲ့ ချစ်ခင်အား​ပေးမှုကို ခံ​နေရတဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်​နေပါပြီ။
မင်းသား Ryu Jun Yeol နဲ့ Girl’s Day အဖွဲ့ဝင် Hyeri တို့က​တော့ “Reply 1988” ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ကူးရင်း စတင်ခင်မင်ခဲ့ကြပြီး သူငယ်ချင်းဘဝက​နေ ချစ်သူအဆင့်​ရောက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက မြစ်ကမ်းနံ​ဘေးမှာ သူတို့ ၂ ဦး ချိန်း​တွေ့​နေကြတဲ့ ဓါတ်ပုံကို Dispatch က ​ဖော်ထုတ်ပြီး​နောက် သူတို့ရဲ့ ဆက်ဆံ​ရေးကို ဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ ၂ ဦးဟာ လူသိရှင်ကြားတွဲ​နေတာ ၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ဆက်ဆံ​ရေးကို ထုတ်​ဖော်ပြသခြင်း သိပ်မရှိ​ပေမဲ့ အခုထိ ​ပျော်ရွှင်တဲ့ အချစ်လမ်းခရီးကို ​လျှောက်လှမ်း​နေဆဲပါပဲ။
5. Heechul (Super Junior) – Momo (TWICE)
Heechul နဲ့ Momo တို့ရဲ့ dating သတင်းက​တော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့ ပထမဆုံးရက်မှာတင် ထွက်​ပေါ်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်​တွေကြား ဟိုး​လေးတ​ကျော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၃ ကြိမ်​မြောက်ထိ dating သတင်း​တွေထွက်​ပေါ်ပြီး​နောက်မှာ​​တော့ သူတို့ ၂ ဦးရဲ့ ဆက်ဆံ​ရေးကို ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ Heechul နဲ့ Momo ဟာ အသက် ၁၃ နှစ်ကွာပြီး Heechul က Momo ထက် ၁၅ နှစ်​လောက် စီနီယာကျ​ပေမဲ့ Heechul ဟာ TWICE အဖွဲ့နဲ့ Momo ရဲ့ ပရိသတ်အကြီးစားဖြစ်ပါတယ်။ Heechul ဟာ TWICE ရဲ့ ပရိသတ်ဖြစ်​ကြောင်းကို TV ဖန်သားပြင်မှာ မကြာခဏထုတ်​ပြော​လေ့ရှိပြီး သူ့အ​နေနဲ့ ပထမဆုံး လူသိရှင်ကြားတွဲဖူးတဲ့ မိန်းက​လေးက Momo ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသား Hyun Bin နဲ့ မင်းသမီး Son Ye Jin တို့က​တော့၂၀၂၁ ခုနှစ်အစပိုင်းမှာ လူသိရှင်ကြား စတွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ “Crash Landing on You” ​ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ သူတို့ ၂ ဦးရဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ သရုပ်​​ဆောင်မှု​ကြောင့် ပရိသတ်​​တွေဟာ အစတည်းက သူတို့ရဲ့ အချစ်​ရေးကို အား​ပေး​ထောက်ခံထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးပြီး လူသိရှင်ကြား ဝန်မခံမီမှာလည်း dating ​ကောလဟာလ​တွေ ခဏခဏ ထွက်​ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်တုန်းက​တော့ သူတို့ ၂ ဦးဟာ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်း​တွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ငြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့အပြင် သူတို့ ၂ ဦးရဲ့ ​ရေစက်ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “The Negotiation” ဇာတ်ကားက​နေ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Source : Mnet TMI news
Photo : Facebook, Instagram
Next ကွာရှင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း နေ့ရက်တိုင်းကို ပိုမိုလှပပြီး တက်ကြွလန်းဆန်းစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ Zhao Liying »
Previous « ပရိသတ်​​တွေ ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်နဲ့ မြင်​တွေ့ချင်ကြတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသား ၇ ဦး